२ कोरिन्थी १२:२०
म त्‍यहाँ आउँदा मैले सोचेको भन्दा तिमीहरू बेग्‍लै भएका अनि तिमीहरूले सोचेका भन्दा म बेग्‍लै भएको हुन्‍छु कि भन्‍ने डर लागेको छ। तिमीहरूका बीचमा झगडा, डाहा र रिस गर्ने, आफ्‍नै भलो खोज्‍ने, गाली गर्ने, अर्काको कुरा गर्ने, अहङ्कार गर्ने, लडाइँ गर्नेहरू छन् भनी मलाई लागेको छ।
तिमीहरूको मुखबाट नराम्रो कुरो ननिस्‍किओस्, चाहिने, राम्रो र भलाइ गर्ने कुरो बोल र सुन्‍नेहरूलाई भलाइ होस्।
“झूटो हल्‍ला नफैलाओ र झूटो साक्षी दिएर एउटा अपराधीलाई मद्दत नगर।
कसैले आफूलाई धर्मी सम्‍झिन्‍छ, तर आफ्‍नो जिब्रोचाहिँ तह लाउँदैन भने उसले आफैंलाई धोखा दिन्‍छ अनि उसको धर्म-कर्म व्‍यर्थै हुन्‍छ।
दाजुभाइहरू, कसैको विरुद्ध नराम्रो नभन। आफ्‍ना विश्‍वासी दाजु वा भाइको विरुद्ध नराम्रो भन्‍ने र दोष लगाउने व्‍यक्ति व्यवस्थाकै विरोधमा बोल्‍छ र व्यवस्थालाई दोष लगाउँछ। तिमीले व्यवस्थाको न्‍याय गर्‍यौ भने तिमी यसको पालना गर्ने होइन तर न्‍याय गर्ने बन्‍छौ।
कसैका विरुद्धमा झूटो कुरा नफैलाओ। कसैको ज्‍यान खतरामा छ र तिम्रो साक्षीले उसलाई सहायता हुन्‍छ भने तिमी बोल। म परमप्रभु हुँ।
 मनमा आफ्‍नो घृणा लुकाउने मानिस ढँटुवा हो, व्‍यर्थका कुरा फैलाउने मानिस मूर्ख हो। जति धेरै बोल्‍छौ, उति नै धेरै पाप गर्ने सम्‍भावना हुन्‍छ, बुद्धिमान् मानिस चुप भई बस्‍छ।
 परमेश्‍वर नमान्‍ने मानिसहरूका कुराले तिम्रो नाश गराउन सक्‍छ तर धर्मीको बुद्धिमानीले तिमीलाई बचाउन सक्‍छ। इमानदारको सुदिन आउँदा सहरबासीहरू खुसी हुन्‍छन्, दुष्‍ट मर्दा रमाहटको सोर उठ्दछ। धर्मीहरूका आशीर्वादले सहर महान् हुन्‍छ तर दुष्‍टका वचनले त्‍यो भताभुङ्ग हुन्‍छ। अर्काको निन्‍दा गरेर बोल्‍नु मूर्खता हो, ज्ञानी मानिस चुप भई बस्‍छ। व्‍यर्थका कुरा गर्ने मानिसलाई गुप्‍त कुरा भन्‍न सकिंदैन तर विश्‍वासयोग्‍य मानिसमा भरोसा राख्‍न सकिन्‍छ।
दुष्‍टहरूले बेकामका कुरा काट्दै हिँड्छन्। तिनीहरूले झगडा गराएर साथीहरूका बीचमा फाटो ल्‍याउँछन्।
 व्‍यर्थको कुरा स्‍वादिलो हुन्‍छ; त्‍यो सुन्‍न हामी खुबै रुचाउँछौं। अल्‍छी मानिस विनाशकारी मानिसजस्‍तै दुष्‍ट हो। परमप्रभु एउटा बलियो धरहराजस्‍तै हुनुहुन्‍छ, जहाँ धर्मीहरू गएर सुरक्षा पाउँछन्, तर धनीहरू भने धनैले, सहरका चारैतिर भएका अग्‍ला र बलिया पर्खालले झैँ तिनीहरूको रक्षा गर्छ भनी ठान्‍छन्। नम्र हुनेहरूले मात्र आदर पाउँछन्, अहङ्कारीहरू विनाशतिर गइरहेका हुन्‍छन्। जवाफ दिनुअघि कुरा सुन्‍ने गर, नत्रता तिमी मूर्ख बन्‍नेछौ र तिम्रो कुराले कसैको अपमान पुर्‍याउनेछ। मानिसको बाँच्‍ने इच्‍छाले उसलाई बिरामी अवस्‍थामा सहारा दिँदछ, तर त्‍यस्‍तो इच्‍छा हराए, उसको बाँच्‍ने आशा पनि हराउँदछ। समझदार मानिसहरू सदा शिक्षा प्राप्‍त गर्न तयार र उत्‍सुक रहन्‍छन्। के ठूला मानिसलाई भेट्‍न चाहन्‍छौ? कोसेली लिएर जाओ र प्रवेश पाउनेछौ। मुद्दामा प्रतिवादीले अघि आएर प्रश्‍न नगरेसम्‍म पहिले बोल्‍नेको कुरा ठीक देखिन्‍छ। वादी र प्रतिवादी दुवै बलिया छन् भने गोला हालेर झगडा मेटाइन्‍छ। भाइलाई सहायता गर र उसले सहरको बलियो किल्‍लाले झैँ तिम्रो रक्षा गर्नेछ तर भाइसित झगडा गरे, उसले तिम्रो लागि ढोका बन्‍द गर्नेछ। मानिसले आफ्‍ना बोलीवचनको फल भोगेर जीवन बिताउनुपर्छ। जीवन वा मृत्‍युको शक्ति बोलीमा हुन्‍छ, जसले बोल्‍न मन पराउँछ, तिमीले आफ्‍नो बोलीअनुसार फल भोग्‍नुपर्दछ।
बेकम्‍मा कुरा गर्नेले गुप्‍त कुरा लुकाइराख्‍न सक्‍दैन। कुराउटे मानिसहरूबाट टाढा बस।
दाउराबिना आगो निभ्‍छ, व्‍यर्थका कुराकानीबिना झगडा साम्‍य हुन्‍छ।
त्‍यसो हो भने खराब कुरा र झूटो बोल्‍नदेखि टाढा बस,
मलाई घृणा गर्नेहरू सबैले मेरो बारेमा आपसमा कानेखुसी गर्छन् र सबैभन्दा नराम्रो कुरा सोच्‍छन्।
हे परमप्रभु, मेरो मुखमा पहरा खटाउनुहोस्। मेरो ओठको ढोकामा रखवाली गरिदिनुहोस्।
 मूर्खले झगडा सुरु गर्नु नै त्‍यसले चुटाइ खोजेको हो। मूर्ख बोल्‍यो भने आफ्‍नै विनाश गर्छ, त्‍यो आफ्‍नै वचनको जालमा फस्‍दछ।
१ तिमोथी ५:१३-१४
 फेरि तरुनी विधवा त अरू मानिसहरूका घरघरै डुल्‍ने बानी भएर बेकामै हुन्‍छन्। त्‍यति मात्र होइन, कुरौटे, झगडा लाउने र बोल्‍न नहुने कुरा पनि बोल्‍ने हुन्‍छन्। यसकारण म तरुनी विधवाहरूले चाहिँ फेरि विवाह नै गरून् भनेर सल्‍लाह दिन्‍छु। यसरी बरु तिनीहरूले छोराछोरी जन्‍माएर गृहस्‍थी बनून्। त्‍यसो भए मात्र हाम्रा विरोधीहरूलाई हाम्रो निन्‍दा गर्ने मौका मिल्‍नेछैन
१ तिमोथी ३:९-११
 उनीहरूले आफैंले पाएको विश्‍वासको गहिरो सत्‍यलाई शुद्ध विवेकले जोगाइराख्‍नुपर्छ। पहिले सेवा गर्नेहरू जाँच गरिनुपर्छ अनि ठीक ठहरिए भने मात्र तिनीहरूलाई पनि सेवा गर्ने काममा लगाउनुपर्छ। तिनीहरूका पत्‍नीहरू पनि त्यसरी राम्रो चालचलनका र अर्काको निन्दा नगर्ने हुनुपर्दछ। तिनीहरूले नराम्रो गफ नगरून् तर आफैंलाई वशमा राखेर सबै कुरामा विश्‍वासी होऊन्।
 दाउराबिना आगो निभ्‍छ, व्‍यर्थका कुराकानीबिना झगडा साम्‍य हुन्‍छ। भुङ्ग्रोलाई कोइला, आगोलाई दाउरा र झगडालाई झगडालुले जागो राख्‍दछ। बेकारका कुराकानी स्‍वादिलो हुन्‍छ! मानिसले त्‍यो खुब रुचाउँछ।
 यसैकारण तिनीहरू सबै किसिमका खराबी र दुष्‍टताले भरिएका छन्। तिनीहरूले लोभ र घृणा गर्छन्, अरूको डाहा गर्छन् र अरूलाई मार्छन्। तिनीहरू झगडा गर्छन्, छक्याउँछन् अनि झूटो बोल्‍छन्, एक-अर्काको चुक्‍ली लाउँछन्, अर्काको निन्‍दा गर्छन्। तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई पनि घृणा गर्छन्, कसैलाई पनि इज्‍जत गर्दैनन् तर आफैं घमण्‍डले फुल्‍छन्, ठूलाठूला कुरा गर्छन्। अनि खराब कुराहरू खोजीखोजी निकाल्‍छन्। तिनीहरूले आमा-बुबाको कुरा मान्‍दैनन्। तिनीहरू मूर्ख छन् अनि गर्छु भनेका कुरा गर्दैनन्। तिनीहरू माया नभएका निर्दयी हुन्। यस्‍ता मानिसहरू मृत्युको योग्य हुन्‍छन् भन्‍ने परमेश्‍वरको धार्मिक विधान जान्दाजान्दै पनि तिनीहरूले त्‍यस्‍तै काम गर्छन्। त्‍यति मात्र होइन, अझ उल्‍टो यस्‍ता काम गर्नेहरूलाई सुर्‍याउँछन्।
 बुढा मानिसलाई शान्‍त, गम्‍भीर अनि विश्‍वासी, प्रेम र सहने शक्तिमा पाको हुनुपर्छ भनेर शिक्षा देओ। त्‍यसरी नै बुढी भएका स्‍वास्‍नी-मान्‍छेहरूले भक्तिको जीवन चुनून्। तिनीहरूले अर्कालाई बिनासित्तीको दोष नलगाऊन्। तिनीहरू रक्‍सीको वशमा नपरून् र राम्रा कुराहरूको शिक्षा देऊन्। त्‍यसो भए तिनीहरूले तरुनी स्‍वास्‍नी-मान्‍छेहरूलाई आफ्‍ना लोग्‍ने र छोरा-छोरीलाई माया गर्न तालिम दिन सक्‍नेछन्। अनि उनीहरूले तिनीहरूलाई आफैंलाई वशमा राख्‍ने, पवित्र मन भएका, दयालु, असल घरजाम गर्ने र लोग्‍नेको अधीनमा रहने शिक्षा दिनेछन्। त्‍यस्‍तै भयो भने परमेश्‍वरको शिक्षाको बदनाम हुन पाउनेछैन।
 तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई दिनुपर्ने मान्यता दिन पनि छाडे। यसो हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई खराबी गरून् भनेर तिनीहरूकै कुविचारमा छोडिदिनुभयो। यसैकारण तिनीहरू सबै किसिमका खराबी र दुष्‍टताले भरिएका छन्। तिनीहरूले लोभ र घृणा गर्छन्, अरूको डाहा गर्छन् र अरूलाई मार्छन्। तिनीहरू झगडा गर्छन्, छक्याउँछन् अनि झूटो बोल्‍छन्, एक-अर्काको चुक्‍ली लाउँछन्, अर्काको निन्‍दा गर्छन्। तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई पनि घृणा गर्छन्, कसैलाई पनि इज्‍जत गर्दैनन् तर आफैं घमण्‍डले फुल्‍छन्, ठूलाठूला कुरा गर्छन्। अनि खराब कुराहरू खोजीखोजी निकाल्‍छन्। तिनीहरूले आमा-बुबाको कुरा मान्‍दैनन्। तिनीहरू मूर्ख छन् अनि गर्छु भनेका कुरा गर्दैनन्। तिनीहरू माया नभएका निर्दयी हुन्। यस्‍ता मानिसहरू मृत्युको योग्य हुन्‍छन् भन्‍ने परमेश्‍वरको धार्मिक विधान जान्दाजान्दै पनि तिनीहरूले त्‍यस्‍तै काम गर्छन्। त्‍यति मात्र होइन, अझ उल्‍टो यस्‍ता काम गर्नेहरूलाई सुर्‍याउँछन्।